March 12, 2020 - Myitter
ယခုည COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ည (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၂-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်းများအား […]
ကောလဟာလနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ပွညျသူမြားထံ ရှငျးလငျးခွငျး
ကောလဟာလနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကရှငျး ကောလာဟလသတငျးမှားမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွညျသူမြားထံ ရှငျးလငျးခွငျး နပွေညျတျော၊ (၂၀၂၀) ပွညျ့နှဈ၊ မတျလ (၁၂) ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနအနဖွေငျ့ COVID-19 ရောဂါ စောငျ့ကွညျ့လူနာနှငျ့ သံသယလူနာမြားသတငျးမြား၊ အဆိုပါလူနာမြား၏ ဓာတျခှဲအဖွသေတငျးမြားကို ပွညျသူမြားထံ နစေ့ဉျ […]
တကယျတောငျးဆိုပါရစကေိုယျ့ဝနျကွီးဌာနကိုပဲလညျး အမွဲအပူကပျလို့မဖွဈနိုငျလို့ပါ။ သီရိသုဓမ်မ ဘှဲ့ရတဲ့တကယျ့သူဌေး မငျးမြားသူဌေးမ မြား ကိုတောငျးဆိုပါရစေ။ တဈလုံး ကိုသိနျး၁၃၀ တနျဖိုးရှိသော Ventilator အသကျရှူစကျမြားတဈလုံးကို၂၅ သိနျးတနျဖိုးရှိ‌သော Patient Monitor စကျမြား PPE ဝတျစုံ တှေ မြားမြား Face Mask တှေ မြားမြားမှာယူ၍ဝယျပွီး ပွညျသူ့ဆေးရုံတှေ […]
ဂျူဗင်တပ်အသင်းကစားသမားရူဂါနီ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရ. ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စောင့်ကြည့်ခန်းထဲရောက်နေတဲ့ စီရော်နယ်ဒို
ဂျူဗင်တပ်အသင်းကစားသမားရူဂါနီ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရ. ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စောင့်ကြည့်ခန်းထဲရောက်နေတဲ့ စီရော်နယ်ဒို ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုမှာ အသင်းဖော် ရူဂါနီတွင် ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် အီတလီသို့ပြန်တော့မည်မဟုတ်ပဲ မွေးရပ်မြေ မာဒဲလ်ယားရှိ နေအိမ်တွင် သီးခြားစောင့်ကြည့်ရေး အခန်းထဲသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီသတင်းစာနှစ်စောင်ဖြစ်သည့် Quotidiano Sportivo and Abola တို့ကလည်း […]
ယနေ့(၁)နာရီအချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ယနေ့(၁)နာရီအချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား သတငျးစုံ ၁၂.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၁၃ ၁၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်းတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း Command and Control Center မှ မြင်တွေ့ရသဖြင့် Level 1 ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ Update […]
၁၁.၃.၂၀၂၀….ဂရုဏာရှင်မိသားစုစေတနာ. ဒီသူငယ်လေးကယခင်က…ဆိုင်ကယ်…ကယ်ရီမောင်းပါတယ်….မိန်းမနေမကောင်းဖြစ်တော့ဆိုင်ကယ်လေးပေါင်ပြီးဆေးကုတယ် မိန်းမလည်းဆုံး…ဆိုင်ကယ်လေးလည်းအပေါင်ဆုံးသွားတော့…. ကျန်ခဲ့တဲ့အမိမဲ့သားလေးကိုစက်ဘီးဟောင်းလေးမှာတင်ပြီးမြွေပါး..ကင်းပါး….တောထဲမှာဖက်ခူးပြီးဝမ်းစာရှာရတယ်… မိမိကမကြာခဏခေါ်ယူပြီးလှူဒါန်းနေဖြစ်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်မှာ…ဂျပန်ပြည်ကသမီးငယ်အေးအေးရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီး…သမီးသူငယ်ချင်းမယဉ်ယဉ်ဆွေကသူ့အဖွား​ဒေါ်သန်းအားအမှူးထားပြီး ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်ခင်မိုးလှိုင်အားရည်စူးလျှက်ဖခင်ဦးအောင်ငွေ…၇၈..နှစ်မွေးနေ့အလှူ..သားသမီးများနှင့်မြေးစွမ်းလပြည့်မိသားစုကောင်းမှုအဖြစ်….ငွေ…၁၁..သိန်းလွှဲပို့လှူဒါန်းထားတယ် မိမိနဲ့..သူတို့နဲ့အာရုံတူနေတာကသူတို့သားအဖ..ဘဝလေးကိုအခြေမြင့်ပေးလိုတာပဲ… ဒါကြောင့်…သူတို့ဘဝလေးအဆင်အပြေဆုံးဖြစ်စေဖို့အကြမ်းခံပြီး..ကယ်ရီဆွဲစားလို့ရမယ့်လိုင်စင်ပါတဲ့ဆိုင်ကယ်အသစ်တစ်စီးကိုရပ်ရွာလူကြီးတွေရှေ့မှာလှူဒါန်းပေးလိုက်ပါတယ် သူက..အဘရယ်..ညကခေါ်ပြီးဆိုင်ကယ်အသစ်စက်စက်တစ်စီးလှူပေးမယ် ကွယ်လွန်သူမိန်းမကိုသတိရတိုင်းစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတိုင်းသေရည်ကိုမသောက်ဖို့ဆိုင်ကယ်ရသွားရင် သားလေးကို…အကျိုးရှိမယ့်ကလေးထိန်းကျောင်းယဉ်ကျေးလိမ္မာကျောင်းပို့ထားဖို့ခေါ်ပြောတော့ဂတိတွေအထပ်ထပ်ပေးပြီး ဆိုင်ကယ်သစ်လေးရရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့အိပ်မပျော်ပါဘူးခုလည်းအိပ်မက်လိုလိုပါပဲကိုယ့်အသားကိုယ်ပြန်ဆိတ်ကြည့်နေရပါတယ်တဲ့… ဟုပ်ပါတယ်…နယ်တွေမှာကလိုင်စင်မပါတဲ့…ဆိုင်ကယ်ဟောင်းတွေကိုပဲ…ဈေးပေါပေါစီးကြတာခုလိုလိုင်စက်ဘီးအသစ်လေးရတော့ကိုယ့်အသားကိုယ်ပြန်ဆိတ်နေရတယ်ဆိုပဲပုံမှန်ဝင်ငွေလေးတော့သူတို့အတွက်ရသွားပါပြီ….. ကလေးငယ်လေးနဲ့မို့နေရေးလေးအဆင်ပြေဖို့သူတို့တဲလေးကိုသွားရောက်ပြင်ဆင်ပေးပါဦးမယ် ထိထိရောက်ရောက်ရှိတဲ့အလှူလေးမို့မိသားစုအားလုံး…ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေပေါ့… နှလုံးသားမေတ္တာရှင် unicode version ၁၁.၃.၂၀၂၀….ဂရုဏာရှငျမိသားစုစတေနာ. ဒီသူငယျလေးကယခငျက…ဆိုငျကယျ…ကယျရီမောငျးပါတယျ….မိနျးမနမေကောငျးဖွဈတော့ဆိုငျကယျလေးပေါငျပွီးဆေးကုတယျ မိနျးမလညျးဆုံး…ဆိုငျကယျလေးလညျးအပေါငျဆုံးသှားတော့…. ကနျြခဲ့တဲ့အမိမဲ့သားလေးကိုစကျဘီးဟောငျးလေးမှာတငျပွီးမွှပေါး..ကငျးပါး….တောထဲမှာဖကျခူးပွီးဝမျးစာရှာရတယျ… မိမိကမကွာခဏချေါယူပွီးလှူဒါနျးနဖွေဈတယျ လှနျခဲ့တဲ့ရကျမှာ…ဂပြနျပွညျကသမီးငယျအေးအေးရှငျကိုအကွောငျးပွုပွီး…သမီးသူငယျခငျြးမယဉျယဉျဆှကေသူ့အဖှား​ဒျေါသနျးအားအမှူးထားပွီး […]
မနေနိုင်လို့ရေးတယ် ဆဲလဲ ခံရမှာပဲ….အခု​လေးတင်ပဲ….ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကို ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောရောဂါ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ…
မနေနိုင်လို့ရေးတယ် ဆဲလဲ ခံရမှာပဲ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောရောဂါ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ “ရောဂါဖြစ်တာ တစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့ ပိတ်ပေးမယ်” မနေနိုင်လို့ရေးတယ် ဆဲလဲ ခံရမှာပဲ….အခု​လေးတင်ပဲ….ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကို Pandemic (ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောရောဂါ) အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ။ “ရောဂါဖြစ်တာ တစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့ ပိတ်ပေးမယ်” “ကျောင်းသားတွေဘက်က ရပ်တည်လို့ သင်္ကြန်ပွဲ […]
ဖြစ်ပြန်ပြီး အာရှလမ်း နတ်စင်ကွေ့
ဖြစ်ပြန်ပြီး အာရှလမ်း နတ်စင်ကွေ့ အာရှလမ်း နတ်စင်ကွေ့ ဘုရားအနီး ရပ်ထားတဲ့ ၆ဘီးယာဉ် ကို မှန်လုံယာဉ်ငယ် ဝင်တိုင်ပြီး ချောက်ထဲသို့ထိုးကျ ၆ဘီးယာဉ်မောင်း ညှပ်ပိသေဆုံးမှန်လုံယာဉ် နယူးအောင်တံခွန် ယာဉ်နောက်လိုက် တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရ ဘန်ကောက်ပြန်ခရီးသည်များ ဘေးကင်း ခရီးသည် ၁၂ ယောက်လိုက်ပါလာသည်။ Ko […]
မြန်မာတွေ အပ်မှိုဆိုပြီး ခေါ်ခေါ်နေကြတဲ့ Enoki မှိုကို ကြိုက်ကြသူများ သတိပြုရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာတွေက အပ်မှို ဆိုပြီးခေါ်တဲ့ Sun Hong Foods, Inc. တံဆိပ်ပါ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတမျိုး ရှိနေတဲ့အတွက် မစားကြဖို့ အမေရိကန် CDC က ပြောလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် – ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက် ဒါမှမဟုတ် […]